ဆံပင်ကျဲခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်သဘာဝအိမ်သုံးဆေးများဖြင့်ထိန်းချုပ်ရန်သိကောင်းစရာများ - အိမ်သုံးဆေးများ
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် မိတ်ကပ် စာအုပ်များ အလုပ်အကိုင်များနှင့်ငွေကြေး စိတ်ဖိစီးမှု၏ ဒိုင် စီမံကိန်း & အကြံဥာဏ် လိင်ကိုချစ်တယ် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ထုတ်ကုန်များ
'' သရဖူဘုန်းအသရေ '' အဖြစ်ရည်ညွှန်း tresses တစ် ဦး ချင်းစီရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စတိုင်ကိုတိုက်ရိုက်စကားရပ်ဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆံပင်အလွန်အကျွံဆုံးရှုံးခြင်းသည်ပြesomeနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးစိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီးမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုထိခိုက်စေသည်။ သို့သော် အကယ်၍ မှန်ကန်စွာစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကဆံပင်ကျခြင်းကိုအချို့သောအိမ်ကုထုံးများဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးသင်၏သော့များကိုချွေတာရာတွင်ထိရောက်သည်။
၁ ။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ
၃ ။ ဆံပင်ကျခြင်းကိုကုသရန်သဘာဝကုထုံးများ
၅ ။ ကျန်းမာသောသော့ခလောက်များအတွက်ဆံပင်ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအချက်များ
၆ ။ ဆံပင်ကျဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမေးအဖြေများ
သံ၊ ကြေးနီ၊ သွပ်နှင့်ပရိုတင်းကဲ့သို့သောသင်၏အစားအစာများတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည်။ ဗီတာမင်ဒီချို့တဲ့ခြင်းသည်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာကိုရှောင်ရှားရန်နေမှထွက်ပြီးအချို့နေရောင်များကိုစုပ်ယူပါ။
အသက် ၃၀ အရွယ်တွင်အမျိုးသမီးများသည်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဟော်မုန်းညီမျှမှုကိုခံစားရသည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်အလွန်အကျွံ dihydrotestosterone (DHT) ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း။ အီစထရိုဂျင်သည်အမျိုးသမီးများထုတ်လုပ်သောအဓိကဟော်မုန်းဖြစ်သော်လည်း testosterone ဟော်မုန်းနှင့် DHEA ကဲ့သို့သောအခြားအန်ဒရိုဂျင်များသည်လည်းမိန်းမခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ဖြစ်ပွားသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အသက်အရွယ်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိသောအခါ၎င်းသည်အန်ဒရိုဂျင်များအား DHT သို့စတင်ပြောင်းလဲလာနိုင်သည်။
အကယ်၍ လည်ပင်း၏ရှေ့ပိုင်းရှိသိုင်းရွိုက်ဂလင်းသည်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း၏အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်မလုံလောက်သောပမာဏကိုထုတ်လုပ်ပါကဆံပင်ကြီးထွားမှုသံသရာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၌သိုင်းရွိုက်ပြissueနာရှိလျှင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အအေးမိခြင်း (သို့) အပူရှိန်ကိုခံစားခြင်းနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းတို့ကဲ့သို့သောအခြားရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
အမျိုးသမီးများ polycystic Ovary syndrome ရောဂါ (PCOS) တွင်ဟော်မုန်းမညီမျှမှုသည်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအန်ဒရိုဂျင်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအရာသည်ဆံပင်ကိုမျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ကြီးထွားစေပြီး ဦး ခေါင်းပေါ်ရှိဆံပင်များသည်ပိုမိုပါးလွှာသည်။ PCOS သည် Ovulation ပြ,နာများ၊ ဝက်ခြံနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေနိုင်သည်။
ကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးများသည်ဆံပင်ကျွတ်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်မိသားစုဆံပင်ကျွတ်သည့်အမျိုးသမီးများအတွက်အထူးသဖြင့်ဆံပင်ပါးခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံသင်ဆေးမသောက်တော့သည့်အခါဆံပင်ကျွတ်နိုင်သည်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်သွေးပေါင်ချိန်နှင့်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်၊ နှလုံးရောဂါ၊ အဆစ်နှင့်စိတ်ကျရောဂါတို့ကိုကုသသောဆေးများဖြစ်သည်။
အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုသည်ရုတ်တရက်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလပေါင်းများစွာကြာရှည်နိုင်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေသည် ယောဂ နှင့်အနှိပ်ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
အလွန်အကျွံကုသမှုခံထားရသောဆံပင်ဆိုးဆေးများနှင့်ပုံစံထုတ်ကုန်များတွင်တွေ့ရသောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်ဓာတုပစ္စည်းများကြောင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အလားတူစွာခေါင်းလျှော်ရည်အားလုံးနီးပါးတွင် Sodium lauryl sulfate (SLS) ပါ ၀ င်ပြီးသင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဆံပင် follicles များကိုထိပါးစေပြီးဆံပင်ကြီးထွားမှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။ သဘာ ၀ ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆိုးဆေးများကိုကပ်ထားသင့်သည်။
အားလုံးခေါင်းပေါ်ကျော်ကနေသွန်းလောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်ဆံပင် ၁၀၀ ခန့်ဆုံးရှုံးသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံစိတ်ဖိစီးမှု၊ ရောဂါ၊ ဆေး၊ ဆံပင်ယေဘုယျအားဖြင့်ခြောက်လအတွင်းပြန်ပေါက်နေသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက်ဆံပင်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆံပင်ပုံစံနောက်ဖက်တွင်ရှိပြီးပါးလွှာသောနေရာတွင်ရှိသည်။ သို့သော်နောက်ဖက်တွင်ထူထပ်သည်။ အင်ဇိုင်းတစ်ခုသည်အမျိုးသားလိင်ဟော်မုန်း testosterone ဟော်မုန်းကိုအခြားဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်သော dihydrotestosterone (DHT) အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေပြီးဆံပင် follicles များအားရပ်တန့်သည်အထိပါးလွှာသောဆံပင်ကိုထုတ်လုပ်သည်။
လူ ဦး ရေ၏ 2% အထိထိခိုက်သော autoimmune ရောဂါ။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ များသောအားဖြင့်ဆံပင်ပြန်ပေါက်လာတတ်သည်။
ငါတို့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှဆံပင်ပေါက်လာတဲ့နှုန်းကနှေးသွားတတ်တယ်။ ဆံပင်မျှင်များသည်သေးငယ်။ ခြယ်မှုန်းမှုနည်းသည်။ ဆံပင်ပါးလွှာ၊ သင်၏ဆံပင်ကိုကျန်းမာအောင်ပြုလုပ်ရန်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုနုပျိုစေပြီးသင်၏ဆံပင်ကိုပါစားသုံးနိုင်သောအစားအစာတစ်ခုလုံးကိုစားပါ။ မင်းရှိရင် အချိန်မတိုင်မီမီးခိုးရောင်ဆံပင် , သင်ဒီမှာကူညီနိုင်သည့်သဘာဝဖြည့်စွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို androgenetic alopecia ဟုသိကြပြီးဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၏အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဒီမျိုးရိုးဗီဇကိုမင်းရဲ့အမေဒါမှမဟုတ်မိသားစုရဲ့ဖခင်ဘက်ကနေအမွေဆက်ခံနိုင်တယ်၊ မင်းမိဘနှစ်ပါးစလုံးဆံပင်ကျွတ်မယ်ဆိုရင်သင်အဲဒီမှာရနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်။
သင့် ဦး ရေပြားအမျိုးအစားကိုနားလည်ရန်နှင့်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဦး ရေပြားပေါ် မူတည်၍ သင်၏ဆံပင်ကိုလည်းဆေးကြောရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆံပင်လျှော်ကျော် ဦး ရေပြား ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်အဆီပြန်သောသော့ခတ်ခြင်းများကိုအတူတူပင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ခေါင်းလျှော်ရည်တွင်သင်၏ tresses ကိုပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့် sulfate, paraben နှင့် silicone အပါအ ၀ င်ဓာတုပစ္စည်းများမပါ ၀ င်ပါစေနှင့်။
ကောင်းမွန်သော conditioner သည်သင်၏သော့ခလောက်များအတွက်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ပျက်စီးသွားသောဆံပင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များပါ ၀ င်ပြီးသူတို့ကိုချောမွေ့စေရန်ကူညီပေးသည်။
သင်၏ဆံပင်ကိုမှန်ကန်သောအာဟာရဓာတ်များအထူးသဖြင့်ပရိုတိန်းနှင့်သံဓာတ်များစွာလိုအပ်သည်။ သို့သော်တစ် ဦး အစာစားခြင်းနှင့်အတူ မျှတသောအစားအစာ သင်ဘေးချင်းယှဉ်လျက်လေ့ကျင့်နေကြောင်းသေချာပါစေ။ ယောဂကျင့်ခြင်းနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသည်ဆံပင်ကျဲမှုကိုလျော့နည်းစေပါသည်။
ဆံပင်ဖြောင့်ဖြောင့်ခြင်း၊ perming လုပ်ခြင်း၊ နောက်ထပ်အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ လေမှုတ်စက် အထူးသဖြင့်စိုစွတ်သောဆံပင်များပေါ်တွင်သင်၏ဆံပင်ပုံစံတွင်ရေကိုပြုတ်။ ဆတ်ဆတ်အောင်ပြုလုပ်သောကြောင့်ချောင်းများ။
Oiling သည်သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးအမြစ်ကိုအာဟာရဖြစ်စေသည်။ သင်၏ ဦး ရေပြားနှင့်ကိုက်ညီသောရေနံနှင့်တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သင်၏ tresses ကိုအနှိပ်ခံရန်သေချာစေပါ။ ၎င်းကိုရေချိုးခန်းအဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ပြီးနှစ်နာရီကြာပြီးနောက်မှိုခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့်ဆေးကြောပါ။
သင်၏ဆံပင်ပေါ်တွင်ဓာတုဗေဒပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများကိုများများအသုံးပြုခြင်းသည်ရေရှည်တွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ သူတို့ကိုခဏအနားပေးပြီးအိမ်မှာလုပ်ထားတဲ့ချက်ပြုတ်နည်းတွေကိုစမ်းကြည့်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
ဥများသည်ဆာလ်ဖာ၊ ဖော့စဖရပ်ရ်၊ ဆယ်လီနီယမ်၊ အိုင်အိုဒင်း၊ ဆံပင်ဖွံ့ဖြိုးမှု ။
ကြက်ဥအဖြူတစ်ကောင်ကိုပန်းကန်လုံးထဲခွဲကာလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစီထည့်ပါ သံလွင်ဆီ နှင့်ပျားရည်။
မိနစ် ၂၀ ခန့်ကြာပြီးနောက်ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆေးပါ။
ဒီအပင်ကဆံပင်ကျွတ်တာကိုကာကွယ်ပေးပြီးဆံပင်ကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်။ ၎င်းသည် ဦး ရေပြားကိုသက်သာစေပြီးခြောက်သွေ့သောအလွှာများ / ချွဲများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
နို့တစ်ခွက်တွင်မြေအောက်အရည် liquorice အမြစ်နှင့်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းလေးပုံတစ်ပုံထည့်ခြင်းဖြင့်ငါးပိပြုလုပ်ပါ။
၎င်းကိုသင်၏ ဦး ရေပြားနှင့်ဆံပင်အရှည်တွင်အသုံးချပြီးတစ်ညလုံးထားခဲ့ပါ။
ထို့နောက်နို့ကိုကြိတ်ထားသောငရုတ်ကောင်းနှင့် fenugreek အစေ့များတစ်ဇွန်းစီထည့်ပါ။
သင်၏ ဦး ရေပြားနှင့်ဆံပင်ကိုလိမ်းပါ။
မိနစ် ၂၀ ကြာပြီးနောက်ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆေးပါ။
ဤလက်ဖက်ရည်သည်ဆံပင်တိုးတက်မှုနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသော antioxidants များစွာပါဝင်သည်။
သင်၏ဆံပင်အရှည်ပေါ် မူတည်၍ တစ်ခွက် - နှစ်ခွက်မျှသောက်ပါ။
အေးသွားသောအခါသင့် ဦး ခေါင်းနှင့်ညင်ညင်သာသာနှိပ်ထားစဉ်သင့် ဦး ရေပြားနှင့်ဆံပင်ကိုလောင်းပါ။
5. Beetroot ဖျော်ရည်
Beetroot သည်ဗီတာမင်စီနှင့် B6၊ ဖောလိတ်၊ မန်းဂနိစ်၊ ဘီတာနှင့်ပိုတက်စီယမ်များစွာပေါများသောကြောင့်ဆံပင်ရှည်ကျန်းမာရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် ဦး ရေပြားသန့်ရှင်းအောင်ကူညီခြင်းဖြင့် detoxification agent အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
7-8 beetroot အရွက်ကိုပြုတ်နှင့် 5-6 henna အရွက်နှင့်အတူကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်။
သင့်ရဲ့ ဦး ရေပြားပေါ်မှာဤငါးပိကိုသုံးပါနှင့်နွေးသောရေနှင့်မဆေးမီ 15-20 မိနစ်ခန့်ထားခဲ့ပါ။
ဒိန်ချဉ် ၂ ဇွန်းကိုပျားရည်နှင့်သံပုရာတစ်ဇွန်းတစ်ဇွန်းနှင့်ရော။ တစ်လုံးထဲထည့်ပါ။
ဆိုးဆေးဖြီးကို အသုံးပြု၍ ဦး ရေပြားနှင့်အမြစ်များကိုကပ်ပါ။
ရေအေးမဆေးမှီမိနစ် ၃၀ ခန့်ထားပါ။
ရှားစောင်းလက်ပတ် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကြီးထွားခြင်းအတွက်ထိရောက်သောအိမ်သုံးဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယားယံခြင်းနှင့်အလွှာပါးခြင်းကဲ့သို့သော ဦး ရေပြား၏ပြproblemsနာများကိုလျှော့ချရာတွင်ထိရောက်ပါသည်။
Aloe Vera ရဲ့အညှာကိုယူပြီးပျော့ဖတ်ကိုထုတ်ယူပါ။
၎င်းကိုသင်၏ဆံပင်နှင့် ဦး ရေပြားတွင် ကပ်၍ ၄၅ မိနစ်ခန့်ထားခဲ့ပါ။
ပုံမှန်ရေနှင့်ဆေးပါ။ ပိုကောင်းသောရလဒ်များကိုတွေ့ရန်တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်သင်လုပ်နိုင်သည်။
၈။ Fenugreek မျိုးစေ့များ
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အတွက် Fenugreek (သို့) Methi အမျိုးအနွယ်သည်အိမ်တွင်းထိရောက်သောကုထုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာဆံပင် follicles ပြုပြင်နှင့်ဆံပင်၏ပြန်လည်ကြီးထွားကူညီပေးသည်။
၎င်းကိုအကောင်းဆုံးငါးပိနှင့်ကြိတ်ပြီးဆံပင်နှင့် ဦး ရေပြားကိုလိမ်းပါ။
မိနစ် ၃၀ ခန့်ကိုသင်၏ခေါင်းပေါ်တွင်ကပ်ထားပါ။
သင်၏ ဦး ရေပြားကိုစိုစွတ်အောင်ရေချိုးရန်အတွက်ရေဖုံးအုပ်ထားပါ။
မိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်ပုံမှန်ရေဖြင့်ဆေးပါ။
ကြက်သွန်နီ၏ပacterိဇီဝဆေးများသည် ဦး ရေပြားရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကူညီပေးသည်။ ဆာလ်ဖာပါဝင်မှုသည်သွေးဖြူဥများသို့သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ဒါဟာဆံပင်ကြီးထွားမှုကိုအားပေးအားမြှောက်နှင့်ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။
ထုတ်ယူရန် ကြက်သွန်ဖျော်ရည် , ကြက်သွန်ကြိတ်ဆုံနှင့်ထို့နောက်ဖျော်ရည်ထွက်ညှစ်။
ကြက်သွန်ဖျော်ရည်ထဲရှိဝါဂွမ်းဘောလုံးကိုလျှော်ပြီးသင့် ဦး ရေပြားတွင်ထည့်ပါ။
၎င်းကိုမိနစ် ၂၀ မှ ၃၀ မိနစ်ခန့်ထားပါ၊ ထို့နောက်ပုံမှန်ရေနှင့်လျှော်ရည်ကို သုံး၍ ဆေးပါ။
Indian Gooseberry or Amla သည်ဆံပင်ကျဲခြင်းကိုရပ်တန့်စေရန်အတွက်နောက်ထပ်ထိရောက်သောအိမ်ဆေးဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဗီတာမင်စီချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် amla စားခြင်းကဆံပင်သားကိုကျန်းမာစေပြီး၎င်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် exfoliating ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် amla သည်ဆံပင်များပိုမိုမြန်ဆန်စွာကြီးထွားစေခြင်း၊ ဦး ရေပြားကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အချိန်မတန်မီဆံပင်ဖြူခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
1 သင်ကငါးပိပြုလုပ်ရန်ထုံးဖျော်ရည်နှင့် amla အမှုန့်ကိုရောစပ်နိုင်သည်။
သင့် ဦး ရေပြားနှင့်ဆံပင်ကိုအနှိပ်ခံပါ။
သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုဖုံးအုပ်ရန်ရေဖုံးအုပ်ထားသည့်အဖုံးကို သုံး၍ ငါးပိခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိစေရန်။
ကျန်းမာသောဆံပင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ဆေးကုသမှုနှင့်ခေါင်းလျှော်ရည်တို့သည်အခန်းကဏ္, မှပါ ၀ င်သော်လည်းထူထဲ။ တောက်ပသောခိုင်မာသော tresses ၏လျှို့ဝှက်ချက်မှာကျန်းမာသောအစားအစာဖြစ်သည်။
သံဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်း ဆံပင်ကျခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဟင်းနုနွယ်ရွက်သည်သံဓာတ်များစွာရရှိရုံသာမကဗီတာမင်အေ၊ စီနှင့်ပရိုတင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဆမ်ဆမ်ပါ ၀ င်သည်ဆံပင်အတွက်သဘာဝအေးစက်စေပြီးအိုမီဂါ -၃ အက်စစ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့်ကယ်လစီယမ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာသော ဦး ရေပြားနှင့်တောက်ပသောဆံပင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။
မျက်လုံးအတွက်ကောင်းမွန်သည်ဟုလူသိများသောမုန်လာဥနီတွင်ဗီတာမင်အေပါ ၀ င်ပြီးဆံပင်တိုးတက်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။ ဗီတာမင်အေ၏ချို့တဲ့မှုသည်ခြောက်သွေ့မှုရှိစေနိုင်သည် ယားယံ ဦး ရေပြား ။ ဆံပင်ကိုထူထဲစေခြင်း၊ ဆံပင်တောက်ပစေခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှုတိုးတက်စေခြင်း၊ ဆံပင်ကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း၊ ဆံပင်ကိုလေထုညစ်ညမ်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီးဆံပင်နှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ဆံပင် ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် keratin protein နှင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့်ကြက်ဥသည်ပျက်စီးသွားသောဆံပင်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးသည်။ သူတို့ကဆံပင်ကိုကြီးထွားအောင်ကူညီပေးတယ်။
Oats သည်အမျှင်ဓာတ်၊ သွပ်၊ သံ၊ Omega-6 fatty acids နှင့် polyunsaturated fatty acids (PUFAs) များပေါများခြင်း၊ ဆံပင်ကိုတိုးတက်စေခြင်း၊
walnuts တွင် biotin, B ဗီတာမင် (B1, B6 နှင့် B9)၊ Vitamin E၊ ပရိုတင်းများနှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်များပါ ၀ င်သည်။ ၄ င်းတို့အားလုံးသည်ဆံပင် cuticles အားကောင်းစေပြီး ဦး ရေပြားကိုအာဟာရဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဆဲလ်များကိုနေရောင်ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော DNA ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ပေးသည်။
ပဲဟင်းသည်ပရိုတင်း၊ သံ၊ သွပ်နှင့်ဇီဝဓာတ်တို့၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အရေပြားနီဥများ၏ကျန်းမာရေးကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်လိုအပ်သောအောက်ဆီဂျင်နှင့် ဦး ရေပြားကိုလိုအပ်သည့်ဖောလစ်အက်ဆစ်ဖြင့်လည်းထည့်သွင်းထားသည်။
8. စတော်ဘယ်ရီနှင့် Guavas
စတော်ဘယ်ရီတွင် silica ပါဝင်သည်။ silica သည်ဆံပင်သန်စွမ်းမှုနှင့်ဆံပင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အရေးကြီးသောသဲလွန်စသတ္တုဖြစ်သည်။ silica ကြွယ်ဝသောအခြားအစားအစာများတွင်ဆန်၊ Oats၊ ကြက်သွန်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ သခွားသီးနှင့်ပန်းဂေါ်ဖီပါဝင်သည်။ ဗီတာမင်စီသည်ဆံပင်ကိုပျက်စီးစေခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ လိမ္မော်သီးကိုဗီတာမင်စီ၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏယူမှတ်သော်လည်း၊ ဂူဗာဗာတစ်ခုသည်လေးဆမှငါးဆအထိထုပ်ပိုးသည်။
ဒိန်ချဉ်တွင်ဗီတာမင် B5 နှင့်ဗီတာမင်ဒီတို့ပါ ၀ င်ပြီးဆံပင်လှည့်ခြင်းကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်။
Beta carotene သည်ခြောက်သွေ့သောဆံပင်မှကာကွယ်ပေးပြီး sebum ဟုခေါ်သောအဆီပြန်သောအရည်ကိုပြုလုပ်ရန်သင့် ဦး ရေပြားရှိဂလင်းများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ လိမ္မော်ရောင်မုန်လာဥနီ၊ မုန်လာဥ၊ ဖရုံသီး၊ cantaloupe၊ သရက်သီးနှင့်အာလူးကဲ့သို့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်၎င်းအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
ဆံပင်များသည်အနီးဆုံးတွင်အထိခိုက်ဆုံးဖြစ်လေ့ရှိပြီးခြောက်ပတ်မှရှစ်ပတ်တိုင်းတွင်ကောင်းသောအရာသည်သင်၏ပြwနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ပျက်စီးသွားသောဆံပင်သည်ကောက်ရိုးကဲ့သို့သောအစရှိသဖြင့်ကြီးထွားမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည် အစွန်းနှစ်ဖက် ။
Stress သည်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအပါအ ၀ င်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများစွာ၏အရင်းခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆံပင်ကြီးထွားမှုဖြစ်စဉ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးအချိန်မတန်မီဆံပင်ဖြူစေနိုင်သည်။ တနည်းကား, ဘာဝနာနှင့်ယောဂပုံမှန်ပုံမှန်စိတ်ဖိစီးမှုမတည်မငြိမ်ဖြစ်သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။
ပူပြင်းသည့်ရေပန်းများကဲ့သို့နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသည့်အတွက်၎င်းသည် (အရေပြားကဲ့သို့) ကြိုးမျှင်များကိုဖယ်ရှားပေးပြီး၎င်းင်း၏သဘာဝအဆီ ဦး ရေပြားကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ခြောက်သွေ့။ ဆတ်ဆတ်ဆတ်သောဆံပင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အစားပူနွေးသောရေကိုရွေးချယ်ပြီးအအေးဆုံးအပူချိန်နှင့်ဆံပင်ကိုသုတ်ရန်ကြိုးစားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးများသည်ဘယ်သောအခါမျှ ပို၍ ပျက်စီးလွယ်ပြီးစိုစွတ်သောအခါပြိုကွဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျယ်ပြန့်သောသွားဖြီးကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုခွင့်ပြုရန်အရေးကြီးသည် လေ - ခြောက် မဆိုပုံစံမတိုင်မီပထမ ဦး ဆုံး။
TO သို့။ ဆံပင်ကျဲခြင်းများရှိပါကအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်သို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒပညာရှင်ထံသို့သွားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကုဆရာဝန်ကသင့်ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆိုးကျိုး alopecia ပြောင်းပြန်ဖြစ်နိုင်သလား?
TO သို့။ ယခုအချိန်တွင် alopecia areata အတွက်ကုသမှုမရှိပါ။ သို့သော်မှန်ကန်သောဆေးဝါးအမျိုးအစားနှင့်ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံစသောလာမည့်နှစ်အတွင်းသင်၏ဆံပင်၏ ၈၀% ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကြီးထွားလာနိုင်သည်။
TO သို့။ ဆံပင်တိုင်၏သဘာဝကြမ်းတိုက်အဝတ်အစားရှိခြင်း ဆံပင်အစားထိုးကုသမှု ချက်ချင်းဖြစ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ အမြစ်တွယ်ရန် ၆ လခန့်ကြာသည်။ ၎င်းနှင့်အတူပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလနှင့်ဆက်စပ်သောပြicationsနာများရှိသည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ Trichologist နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အပြည့်အဝစစ်ဆေးပြီးနောက်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်လိုအပ်သည်၊ မလိုအပ်သည်ကိုသင်နားလည်နိုင်သည်။
သင်လည်းဖတ်နိုင်သည် လွယ်ကူပြီးထိရောက်သောဆံပင်ကျခြင်း ။
Categories ထုတ်ကုန်များ အရေပြား ချက်ချင်းပြင်ဆင်ချက်
သဘာဝက alopecia ကုသရန်